Askar Iyo Saraakiil Lagu Dilay Camaliyad Istish-haadiyo Ah. – Bogga Calamada.com
Askar Iyo Saraakiil Lagu Dilay Camaliyad Istish-haadiyo Ah.
May 28, 2017 5:45 am Views: 102
Wararka ka imaanaya gobalka Khowst ee dalka Afghanistan waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay Camaliyad Istish-haadiyo ah ay ka dhacday qeybo ka mid ah gobalkaasi oo ah gobal dhaca Bariga dalkaasi.
Camaliyadda waxaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada maamulka daba dhilifka magaalada Kaabul gaar ahaan qeybta gurmadka deg dega kuwaasi oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah degmada Khowst ee xarunta gobalkaasi.
Page-ka ImaaradaÂ Islaamiga Afghanistan ay ku leedahay Barta Telegram-ka ayaa baahiyay qoraal kasoo baxay Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid afhayeenka Imaarada Islaamiga kaasi uu sheekha kaga hadlay camaliyaddaasi Istish-haadiyada ah.
Qoraalka ayaa lagu xusay in camaliyadda uu fuliyay Xaafid Idiris oo ka tirsanaa Katiibada Istish-haadiyiinta ee Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan,waxaana uu hogaaminayay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Weerarkan waxaa lagu dilay inka badan Labo iyo Labaatan ka tirsan ciidamada gurmadka deg dega ee maamulka daba dhilifka Afghanistan tiro intaa ka badan waa lagu dhaawacay camaliyaddaasi.
Labo maalin ka hor ayey aheed markii Camaliyad Istish-haadiyo ah oo ka dhacday qeybo ka mid ah gobalka Helmand ee Konfurta dalka Afghanistan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen inka badan Shan iyo Labaatan Xubnood oo ka tirsanaay sirdoonka mamaulka daba dhilifka Ashraf Gan ee magaalada Kaabul.